कसरी तपाइँको युट्यूब भिडियो र च्यानल अप्टिमाइज गर्ने Martech Zone
हामीले हाम्रो ग्राहकहरूको लागि हाम्रो अप्टिमाइजेसन गाइडमा काम गरिरह्यौं। जब हामी अडिट गर्छौं र हाम्रा ग्राहकहरूलाई के गलत छ र किन यो गलत हो भनेर प्रदान गर्दछौं, यो आवश्यक छ कि हामी पनि मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दछौं कसरी मुद्दाहरू सच्याउनुहोस्।
जब हामी हाम्रो ग्राहकहरूको अडिट गर्छौं, हामी उनीहरूको युट्युब उपस्थिति र उनीहरूले अपलोड गरेको भिडियोहरूसँग सम्बन्धित जानकारी बढाउनको लागि गरिएको न्यूनतम प्रयासमा हामी सधैं आश्चर्यचकित हुन्छौं। धेरै जसो भिडियो अपलोड गर्नुहोस्, शीर्षक सेट गर्नुहोस्, र हिंड्नुहोस्। यूट्यूब गुगल पछाडिको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो खोज इञ्जिन हो र गुगल सर्च ईन्जिन नतिजा पृष्ठहरूको पनि प्रशंसा गर्दछ। तपाईंको भिडियो अप्टिमाइज गर्नाले तपाईंको प्रत्येक भिडियो प्रासंगिक खोजीमा फेला पर्नेछ।
तपाईंको YouTube च्यानल अनुकूलन गर्नुहोस्
पहिले, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ नेभिगेट गर्नुहुन्छ अनुकूलन in YouTube स्टूडियो र तपाईंको च्यानललाई अनुकूलित गर्न सबै सुविधाहरूको लाभ लिनुहोस्।
लेआउट - तपाईंको च्यानल ट्रेलर र ग्राहक फिर्ताको लागि तपाईंको विशेष भिडियो अनुकूलित गर्नुहोस्। फिचर गरिएको सेक्सनहरू थप्न निश्चित गर्नुहोस् - यदि तपाईंसँग भिडियो प्रकारहरू छन्, यहाँ प्रत्येकमा तपाईंको भर्खरको भिडियोको साथ एकल प्लेसूचीहरू थप्नको लागि उत्तम ठाउँ छ।
ब्रान्डिङ - तपाइँको च्यानलको लागि तस्वीर थप्नुहोस्, सामान्यतया तपाइँको लोगो, राउन्ड छवि प्रदर्शनका लागि ढाँचा। कम्तिमा २०2048 x ११1152२ पिक्सेलमा ब्यानर छवि थप्नुहोस् तर छविले प्रत्येक आउटपुटमा कसरी प्रदर्शित हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुहोस्। YouTube ले तपाईंलाई प्रत्येक पूर्वावलोकन गर्न दिन्छ। साथै, ब्रान्ड जागरूकताका लागि भिडियो भर एक भिडियो वाटरमार्क थप्नुहोस्। दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाइँ प्रत्येक भिडियो मा सामग्री छैन कि तपाइँको वाटरमार्क पछाडि लुकाउन सकिन्छ।
आधारभूत जानकारी - तपाईंको च्यानलको राम्रो वर्णन प्रदान गर्नुहोस् जुन तपाईंको च्यानललाई अवलोकन गर्न र सदस्यता लिन आगन्तुकहरूलाई मोहित गर्दछ। एकचोटि तपाईंले १०० सदस्यहरू प्राप्त गर्नुभयो र तपाईंको च्यानल 100० दिनको लागि भयो, तपाईंको URL लाई तपाईंको च्यानलको मार्गको लागि उपनामको साथ अनुकूलन गर्नुहोस् यूट्यूबले प्रदान गर्ने अद्वितीय कुञ्जीको सट्टा। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंको आधारभूत जानकारीमा लिंकहरू थप्नुहोस् जसले मानिसहरूलाई तपाईंको साइट वा अन्य सामाजिक च्यानलहरूमा फर्काउँछ।
प्रकाशित गर्नु भन्दा पहिले
तपाईंको भिडियोको उत्पादनमा केहि सुझावहरू। वास्तविक रेकर्डि and र भिडियोको सम्पादन बाहिर, प्रकाशित गर्नु अघि यी महत्त्वपूर्ण भिडियो तत्त्वहरूलाई वेवास्ता नगर्नुहोस्:
अडियो - के तपाईंलाई थाहा छ अधिक व्यक्तिले भिडियो गुण भन्दा अडियो मुद्दाहरूको लागि भिडियो छोड्नेछ? इको, रिभर्ब, र पृष्ठभूमि शोर बिना ध्वनी क्याप्चर गर्न महान अडियो उपकरणको साथ तपाईंको भिडियो रेकर्ड गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
परिचय - एक कडा ईन्ट्रो मान्छे तपाइँको भिडियो हेर्न जारी गर्नु पर्छ को लागी टोन सेट गर्नु पर्छ। धेरै दर्शकहरू केहि सेकेन्डहरू हेर्नुहोस् र हिंड्न। तपाईको ब्रान्डको परिचय दिनुहोस् र मानिसहरूलाई उनीहरूले के सिकाउन खोजिरहेका छन् सोध्नुहोस् यदि तिनीहरू वरिपरि रहन्छन्।
Outro - एक कल-टु-एक्शनको साथ कडा प्रस्थान र गन्तव्य तपाईंको दर्शकलाई अर्को चरणमा लिनको लागि महत्वपूर्ण छ। म तपाईंको भिडियोको अन्तिम सेकेन्डमा गन्तव्य यूआरएल, वा ईमेल ठेगाना र फोन नम्बर अत्यधिक प्रोत्साहित गर्दछु। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि भिडियोको URL URL सँग मिल्दछ जुन हामीले तलका चरणहरूमा वर्णन गर्दछौं।
यूट्यूब भिडियो अनुकूलन
यहाँ हामीले ग्राहकको युट्यूब भिडियो समीक्षा गर्दा के हेर्छौं त्यसको ब्रेकडाउन छ।
भिडियो शीर्षक - तपाइँको भिडियो च्यानल एक कुञ्जी शब्द-धनी शीर्षक प्रदान गर्नु पर्छ। अब सम्म, कसरी तपाइँ तपाइँको भिडियो शीर्षक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो। युट्यूबले तपाइँको भिडियो शीर्षक दुबै पृष्ठमा हेडि forको लागि र यसको शीर्षकको लागि प्रयोग गर्दछ। पहिले कुञ्जी शब्दहरूको उपयोग गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईंको कम्पनीको जानकारी:
तपाइँको युट्यूब भिडियो कसरी अनुकूलित गर्ने मार्टेक
विवरण - एक पटक तपाईंले आफ्नो भिडियो अपलोड गर्नुभयो, तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि त्यहाँ धेरै, तपाईंको भिडियोमा जानकारी विवरणको लागि धेरै धेरै विकल्पहरू छन्। यदि तपाईं एक स्थानीय दर्शकहरू आकर्षित गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं वास्तवमा तपाईंको भिडियोमा स्थान थप्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले गर्न सक्ने हरेक विवरण भर्नुहोस्, यसले तपाईंको भिडियोलाई सही अनुक्रमणिका गरिएको र फेला पार्न मद्दत गर्दछ! तपाईंको भिडियो प्लेलिस्टमा व्यवस्थित गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
थम्बनेल - एकचोटि तपाईंले फोन नम्बरबाट तपाईंको YouTube च्यानल प्रमाणित गर्नुभयो, तपाईं प्रत्येक भिडियोको थम्बनेल अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ। यो गर्नको लागि अविश्वसनीय तरिका भिडियो छविमा तपाईंको शीर्षक मिलाउनु हो, यहाँबाट एक उदाहरण छ क्रफोर्डस्विले, इन्डियाना रूफर हामी संगै काम गर्दैछौं, कुक होम सेवाहरू:
URL पहिले - यदि कसैले तपाइँको भिडियो फेला पार्दछ र तिनीहरूले यो रमाईलो गर्छन्, कसरी तिनीहरू तपाइँको साइटमा फिर्ता जान्छन् तपाइँ संग संलग्न हुन? तपाइँको वर्णन क्षेत्रमा, तपाइँको पहिलो चरण लिडिंग पृष्ठमा फिर्ता लि put्क राख्नुपर्दछ जुन तपाइँ मानिसहरूले भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ। यूआरएल पहिले राख्नुहोस् ताकि यो अझै छ कि काटिएको वर्णन क्षेत्र को साथ देखा पर्दछ जुन Youtube बनाउँछ।
विवरण - केवल एक वा दुई रेखा नलगाउनुहोस्, तपाईंको भिडियोको एक मजबूत व्याख्या लेख्नुहोस्। धेरै सफल भिडियोहरूले वास्तवमा सम्पूर्ण समावेश गर्दछ भिडियो ट्रान्सक्रिप्शन यसको सम्पूर्णतामा। कुनै पनि पृष्ठमा समर्थन सामग्री हुनु महत्वपूर्ण छ ... युट्यूबमा यो अत्यावश्यक छ।
क्याप्सनहरू - अधिक र अधिक व्यक्ति ध्वनि बन्द संग भिडियोहरू हेरिरहेका छन्। तपाईंको भिडियो क्याप्शनको लागि पठाउनुहोस् ताकि मान्छेहरूले भिडियोसँगै पढ्न सक्दछन्। तपाईंले आफ्नो भिडियोको भाषा र यसको ट्रान्सक्रिप्शन ठीकसँग सेट गर्न आवश्यक छ, तब तपाईं एउटा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ SRT फाईल कि भिडियो समय संग प .्क्तिबद्ध गर्दछ।
ट्याग - ट्यागहरूको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुहोस् कुञ्जी शव्दहरूमा सूचीबद्ध गर्नका लागि तपाईले आफ्नो भिडियो खोज्नको लागि मानिसहरू। तपाईंको भिडियो ट्याग गर्न यो यूट्यूब खोजमा यसको दृश्यता बढाउन एक उत्तम तरिका हो।
टिप्पणी - उच्च टिप्पणी गतिविधि भएको भिडियो बिना कुनै टिप्पणीको भिडियो भन्दा धेरै उच्च श्रेणीको हुन्छ। सहकर्मीहरू र सहकर्मीहरूसँग तपाईंको भिडियो साझेदारी गर्नुहोस् र उनीहरूलाई थम्ब्स-अप र भिडियोमा एक टिप्पणी थप्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्।
दृश्य - तपाईंले अहिलेसम्म गर्नुभएन! तपाईंको भिडियो जताततै प्रचार गर्नुहोस् ... ब्लग पोष्टहरूमा, वेब पृष्ठहरूमा, सामाजिक नेटवर्कहरूमा, र प्रेस विज्ञप्तिको साथ पनि। तपाईंको भिडियोमा जति धेरै हेराईहरू हुन्छन्, त्यति नै लोकप्रिय हुन्छ। र व्यक्तिले विचारको साथ एउटा भिडियो हेर्न र विचारहरूको कम गन्तीको साथ छोडिन्छ।
भिडियो साइटम्यापहरू - यदि भिडियोहरू तपाईंको साइटको एक प्रमुख भाग हो भने, तपाईं एक भिडियो साइटम्याप सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको वेबसाइट वा ब्लगमा प्रकाशित गर्दा। भिडियो सामग्रीले वेब पृष्ठहरू समावेश गर्दछ जसले भिडियो इम्बेड गर्दछ, भिडियोका लागि प्लेयरहरूको URL हरू, वा तपाईंको साइटमा होस्ट गरिएको कच्चा भिडियो सामग्रीको यूआरएलहरू। साइटम्यापले शीर्षक, वर्णन, प्ले पृष्ठ URL, थम्बनेल URL, र कच्चा भिडियो फाइल स्थान, र / वा प्लेयर URL समावेश गर्दछ।
प्रकटीकरण: मँको साथ मेरो सम्बद्ध लिंक प्रयोग गर्दैछु Rev, भिडियो ट्रान्सक्रिप्शन र क्याप्शनको लागि उत्कृष्ट सेवा।
टैग: क्याप्सन बन्द गर्नुहोस्बन्द क्याप्सनगुगल वेबमास्टरगुगल वेबमास्टर उपकरणहरूतपाइँको युट्यूब भिडियो अनुकूलन गर्नुहोस्यूट्यूब लाई अनुकूलन गर्नुहोस्srt फाईलभिडियो क्याप्शन बन्द गरियोभिडियो अनुकूलनभिडियो एसईओभिडियो साइटम्यापभिडियो ट्रान्सक्रिप्शनभिडियो xML साइटम्यापYouTube च्यानल अप्टिमाइजेसनयूट्यूब अनुकूलनYouTube भिडियोयूट्यूब भिडियो अनुकूलन